Wararka Maanta: Sabti, Nov 14, 2020-Puntland oo siidaysay 6 dhalinyaro ah oo u xirnaa dilkii guddoomiyihii gobolka Nugaal
Dhalinyarada maanta xoriyadooda helay ayaa intuba waxay yihiin dhalinyarada ka shaqeysata dhaqida baabuurta, kuwaas oo muddo ka badan 8 bilood ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garowe.
Maxkamada gobolka Nugaal ayaa ku weyday wax dambi ah, waxayna go’aamisay in xoriyadooda loosoo celiyo sida uu HOL, u sheegay sarkaal katirsan laamaha amniga.
Maalinta berito ayaa sidoo kale la filayaa inay Puntland sii dayso labo qof oo kale oo iyagana lagu waayay wax dambi ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa todobaadyo ka hor hay’addaha garsoorka u sheegay in aan xabsiyada lagu hayn karin cid aan dambi lahayn.
Dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale la siidaayay 7 qof oo iyagana kiiskaan u xirnaa, kuwaas oo ay ku jireen macalimiin dugsi qur'aan.